May 2012 - iftineducation.com
iftineducation.com – Qisadaan oo ah Dhacdo murugo leh isla markaana xambarsaan tiiraanyo xanuun badan oo hadaad aqrisato aad dareemeyso xanuun badan adiga oo aysan kugu dhicin qisadaan balse maxaad maleysan kartaa hadii ay kugu dhaci laheyd aqristow? Qisadaan waxa ay muujineysa sida dadka qaarkii ay jaceylka ula dhaqmaan oo aysan marnaba ugu jixin jixin nafta jacel waxa ay dhaxmartay lamaane somaaliyeed…
Fatima Haryan iftineducation.com – Fatima Haryan ayaa ah fanaanad caan ka ah cariga Kenya, fanaanadani waxey kamid tahay fanaaniintii soo shaac baxay xili dhow, dadka xiiseeyo arimaha fanka Fatima haryan waxey kuxasuustaan heestii aheyd nafyahay. Mudooyinkii ugu danbeeyay waxaa fanka kusoo biirayay fanaaniin aad u da’yar kuwaasoo cod dahabi ah lasoo shaac baxayay, halka qaarna fanka uun xiiseynayeen balse…
iftineducation.com – Dhacdadaan ayaa waxay dhex martay lamaane Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Yaasir iyo Nafisa, Yaasir ayaa ka sheekeeyay qisadaan oo mid xanuun badan ah. Waxaan ku dhashay magaaladda Hargeysa, balse waxaan kusoo barbaaray dalka Sacuudi Carabiya, nasiib wanaag sanadkii 2000 ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan soo caga dhigto magaaladda London ee dalka Ingiriiska. Gabadha aan ifka ugu jeclaan…
iftineducation.com – Waxaa jira arimo si weyn haweenka u dhibsadaan gaar ahaan xaasaska , iyadoo qaarkood ay ku reebaan saameyn xun oo dhaawaca dareemaheeda hadaba ninyahoow iska ilaali arimahaas . In aad dhaleeceyso oo aad wax ka sheegtay waalidkeeda , ogaaw dhaawac ayay arintaas gaarsiineysa lagamana yaabo in si sahal ah ay ku iloowdo . In aad muuqaalkeeda wax kaga hor…
iftineducation.com – Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in duqeyn aad u xoogan ay ku socoto magaaladaasi qeybo ka mid ah iyadoona Xarakada Al-shabaab kala carar aan caadi ahayn uu soo wajahay. Saldhigyada Al-shabaab ee ay ku leeyihiin Kismaayo iyo waliba sidoo kale xarumo hubka ay ku keydsadaan ayaa la sheegayaa in si…
iftineducation.com – Sida ku cad magaca kor ku xusan waa kaftan Saxaafadeed ku saleysan xaqiiq laga dhex sameeyay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen wariyayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan waqtiyadii adkaa ee la soo darsey taasoo ay xusid mudan tahay in wali ay jiraan dhibaatooyinka lagu hayo wariyayaasha iyo warbaahintaba. Waxaa laga yaabaa in siyaabo kale duwan loo fasirto qormadaan laakiin ha…
Waa Maxay Guurka Xawilaada, Maxaadse ka taqaanaa &Bal Kaalay oo inala faa iideyso
iftineducation.com – Guurka xawilaada ah waa guurka waayadaan dambe la caadiyeestay, isla-markaasna noqday middka intabadan gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka somaliya iyo weliba kuwa ku nool dalalka deriska ah loo isticmaalo qaab xawilaad ah. Waxaana intabadan isticmaalo ragga ku nool dalalka reer-galbeedka islamarkaasna u soo guurdoonta, hablaha ka dhashay reeraha tabartay yar iyo kuwa aan aqoont leheen. Waayo gabadha…
Ninyahoow Is Islaali Haweenka Erayadaan Oo Kale Waa Neceb Yihiin .
Ninyahoow Is Islaali Haweenka Erayadaan Oo Kale Waa Neceb Yihiin . iftineducation.com – Baaritaan la sameeyaya ayaa muujinaya in jumladaha ugu adag ee ay haweenka sida weyn uga caroodaan ayaa quburo ku xeel dheer arimaha qoyska ku sheegeen in ay tahay oraahda ah “Maxaan Cunnaa Maanta”oo ay ka maqlaan ragooda . Waxa ay haweenka u arkaan arintaan amar dad badan oo…
Daawo Muuqaal ahaan Dhaqtarkii jaajuusay islamarkaana u gacan galiyey Dalka Mareykanka Hogaamiyihii Alqaaciida Osama Bin ladan
aadan21 / May 29, 2012
iftineducation.com – Dhaqtarkii jaajuusay islamarkaana u gacan galiyey dalka Mareykanka hogaamiyihii Alqaaciida Osama Bin ladan taas oo keentay in la dilo hogaamiyahaas ayaa waxaa la sheegay in lagu xukumay xabsi gaaraayo ilaa iyo 33 sanadood iyadoona ay arintaas caro weyn ka muujiyeen dowlada dalka Mareykanka. Dhaqtarkan oo lagu magacaabo Shakil Afridi oo 48 sano jir ah ayaa waxaa la sheegay inuu…
Fabrega oo Van Persie kala taliyey inuusan ka tegin kooxda Arsenal
aadan21 / May 28, 2012
iftineducation.com – Kabtanki hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Cesc Fabregas ayaa Robin Van Persie kula taliyey inuusan ka tagin kooxda islamarkaana uu la joogo. Robin Van Persie oo la sheegay inuu xagaaga marki la gaaro ka tagayo kooxda Arsenal ayaa lagu warramayaa in looga gacan haatinayo garoonka Al-Etixaad ee magaalada Manchester.Fabregas oo sanadki hore waqti dheer ku qaadatay…